Wararka - Warbixinta Gaarka ah ee TV-ga ee NEWGENE Novel Coronavirus Antigen Product ee Isbaanishka
NEWGENE Novel Coronavirus Antigen ogaanshaha waxsoosaarka ayaa helay warbixin TV gaar ah oo kusaabsan idaacada maxaliga ah ee Isbaanishka Antena3. Wax soo saarka NEWGENE wuxuu helaa caan caan ah waxaana si weyn looga aqoonsan yahay gudaha waxqabadkeeda iyo ku habboonaanta isticmaalka.
Waqtigan xaadirka ah, alaabooyinka taxanaha ogaanshaha ee 'NEWGENE Novel Coronavirus' ayaa laga diiwaangeliyey Talyaaniga, Argentina, Peru, Ecuador iwm waxayna soo mareen xaqiijinta caafimaad ee shaybaarrada waxqabadka wanaagsan leh. Wax soo saarka NEWGENE waxaa laga iibiyey in ka badan 30 dal iyo gobol. NEWGENE waxay u heellan tahay inay gacan ka geysato ololaha ka hortagga cudurrada faafa.
NEWGENE waxay soo saartay ilaha iskaashiga ballaaran ee nidaamyada caafimaadka iyo caafimaadka adduunka, waxayna sameysay iskaashi muddo dheer ah oo xasilloon wadamo badan oo ku yaal Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, Latin America iyo gobollada kale, waxayna u heellan tahay inay macaamiisha siiso alaab iyo adeegyo tayo sare leh. NEWGENE waxay sii wadi doontaa inay u adeegto sababta caafimaadka aadanaha iyada oo leh faa'iidooyinkeeda farsamo ee gaarka ah.